Rugby Afrasia U18 : laharana fahefatra ny Makis de Madagascar | NewsMada
Rugby Afrasia U18 : laharana fahefatra ny Makis de Madagascar
Azo lazaina fa tsara ihany koa ny zava-bitan’ny Makis de Madagascar, sokajy U18 teo amin’ny fiadiana ny “Afrasia 2017”. Fihaonana notanterahina tatsy amin’ny Nosy Maorisy, izay nifarana, ny asabotsy lasa teo. Nitana ny laharana fahefatra, tamin’ireo ekipa 10 nandray anjara, ny Makis de Madagascar. Lavon’i La Réunion, teo amin’ny fiadian-toerana.
Tamin’ny isa, 31 no ho 14, ny nisarahan’ny roa tonta, rehefa nitarika tamin’ny isa 14 no ho 12, teo am-pialan-tsasatra. Nambaran’ny mpitarika ny delegasiona fa nanantombo teo amin’ny haben’ny vatana ny Reonioney, ka nampananosarotra ny Malagasy ny nanakana azy ireo. Na izany na tsy izany, tao amin’ny tanjany tsara ny Makis, satria raha vao lasa amin’ny hazakazaka dia efa very ireo mpifanandrina taminy.
Nanjakan’ny Afrikanina tatsimo kosa ny lalao, satria ekipa roa avy amin’izy ireo no niatrika ny famaranana tamin’ity. Nolazain’ireo mpilalao fa nahazoany traikefa ny fiatrehana iny fihaonana iny, indrindra ny filalaovana tamin’ny alina, miaraka amin’ny “projecteur”, izay ilaina fahazarana tanteraka.
Tsiahivina, fa ankoatra an’i Maorisy mpampiantrano sy i La Réunion ary i Afrika atsimo, nandefa ekipa ihany koa i Mayotte.